काठमाडौंका नदी कोरिडोर ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
काठमाडौंका नदी कोरिडोर ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै
पुष २१, २०७४ 1333 ऊर्जाखबर/काठमाडौं
उपत्याको वैकल्पिक सडकका रूपमा निर्माण सुरु गरिएको तीन नदी कोरिडोर निर्माणको काम सरकारी निकायकै बेवास्थाले अलपत्र परेको छ । धोबीखोला, विष्णुमती र बागमती नदी कोरिडोर निर्माणमा सरकारी निकायले चासो दिन छोडेका छन् ।
साँघुरा र उपत्यकाभित्र सडक विस्तारका कारण अधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । कोरिडोरको ट्र्याक खोलिए पनि ग्राबेल र कालोपत्रे गर्ने कामले गति लिएको छैन ।
समयमै निर्माण पूरा नहुँदा लक्षित कोरिडोर सवारी बनाउने ग्यारेज, निर्माण सामग्री, फोहोरको डंगुर थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै गएका छन् । यसले नदी किनारका बासिन्दालाई समेत सास्ती दिएको छ । कोरिडोर निर्माणपछि आवत–जावत गर्न सहज होला भन्ने आशा गरेको बर्षौं भयो,’ कालोपुलकी सरस्वती श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले त यो ठाउँ व्यापारिक थलो बनेको छ ।’
खाल्डा खुल्टी, पानी जम्ने र धुलो उड्ने कारणले पैदलयात्रीलाई समेत कठिनाई भएको छ । तीन कोरिडोर सञ्चालन भए काठमाडौंको ३० देखि ४० प्रतिशत सवारी जाम हट्ने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको दाबी छ ।
उता कपन भंगालपुलदेखि बागमती दोभान (खैरोपुल) सम्म तीन चरणमा धोबीखोलाको दुबै किनारमा २४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको छ । १५ वर्षमा २० करोड खर्च गरेर करिब ४५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
स्थानीय अवरोध, मुआब्जा समस्यालगायत कारणले निर्माण कामको प्रगति नदिेखिएको धोबीखोला कोरिडोर सुधार आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताए । यता बामगमती कोरिडोरको काम पनि सुस्त छ ।
गोकर्णेश्वर मन्दिरदेखि बल्खुसम्म १७ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ । यो सडकअन्तर्गत हालसम्म ३ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ । गोकर्णेश्वर–गुहेश्वरी, तिलगंगा–सिनामंगल, सिनामंगल–मिनभवन, शंखमुल– थापाथली, थापाथली–बल्खु खण्ड निर्माण चरणमा छ ।
विष्णुमती नदी कोरिडोर निर्माणसमेत अलपत्र छ । यो नदी किनार पनि अहिले फोहोरको डम्पिङजस्तै बनेको छ । खोलाको किनारै–किनार टेकु पुलदेखि शोभाभगवती मन्दिर जाने बाटो भद्रगोल छ । तीन वर्षदेखि यहाँका बासिन्दाले धुलो र हिलोको सामना गर्दै आएका छन् ।
बाग्मती दोभानदेखि महादेवखोला दोभानसम्म ६ किलोमिटरमा ढल मुक्त पार्न काम भइरहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले बताए । यो कोरिडोरमा अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत काम भएको छ ।